बच्चालाई ज्वरो आउँदा के गर्ने, के नगर्ने ? | Ratopati
अभिभावकले रोगबारे सामान्य जानकारी राख्दा बच्चालाई गम्भिर संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ३, २०७६ chat_bubble_outline0
photo : https://thestir.cafemom.com/
बालबालिकाहरुलाई यो मौसममा भाइरल ज्वरोले धेरै नै दुःख दिने गरेको हुन्छ । बालबालिकामा छिटै फैलने भाइरल ज्वरो र अविभावकले अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालकी बाल रोग विशेषज्ञ डा. अन्ना शर्मासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
बालबालिकामा धेरै भाइरल ज्वरोको समस्या देखिनुको कारण के होला ?
भाइरल संक्रमणबाट अन्य समस्या पनि हुन्छन् ?
यो बिरामीलाई सजिलो पार्ने उपाय मात्रै हो र यसले ठीक हुन३ देखि ५ दिनको समय लिन्छ । बच्चालाई झाडापखाला लाग्यो भने शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन नदिनेबारे विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । झाडापखाला लागिबस्ने तर दूध तथा अन्य झोलिलो खानेकुराहरु पर्याप्त मात्रामा खुवाइएन भने बच्चालाई जलविनायोजन (डिहाइड्रेसन) को समस्या हुन सक्छ । त्यस्तो समस्याबाट बच्चालाई बचाउनु पर्छ । माथि उल्लेख गरिएको तरिका अपनाउँदा विरामीको शरीरमा झाडापखालाका कारण पानीको मात्रा कम हुन पाउँदैन ।
झाडापखाला लागिरहने तर दूध तथा अन्य झोलिलो खानेकुराहरु पर्याप्त मात्रामा खुवाइएन भने बच्चालाई जलविनायोजन (डिहाइड्रेसन) को समस्या हुन सक्छ । त्यस्तो समस्याबाट बच्चालाई बचाउनु पर्छ ।
त्यसैगरी, बच्चाहरुमा गर्मी मौसममा भाइरलबाहेक देखिने समस्या टाइटफाइड र जन्डिस (हेपाटाइटिस ए) पनि हुन् ।
आवश्यक नै नहुने समस्यामा पनि एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु खतरनाक हुन सक्छ । जथाभावी एन्टिबायोटिक चलाउन थालियो भने पछि एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने हुन्छ । यसलाई एन्टिबायोटिकप्रतिरोध (Antibiotic Resistance) भनिन्छ । अर्थात् व्याक्टेरियाहरुले ती औषधिलाई पचाउन थाल्छ र समस्या पर्दा ती औषधीहरुले काम नै गदैन । कडा खालको एन्टिबायोटिकहरु चलाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । रगत परीक्षण गरेर भाइरल हो वा ब्याक्टेरिया हो छुट्याएर आवश्यक पर्दा मात्रैएन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
बच्चाहरुको भविष्य सानैदेखि हुने वृद्धिविकासमा निर्भर हुन्छ । विरामी भएर मात्रै डाक्टरकोमा जाने होइन । उनीहरुको तौल के छ ?उचाई के छ ? वृद्धिदर कस्तो छ ? शारीरिक विकास कस्तो छ ? आदि को बारेमा जानकारी लिन जरुरी हुन्छ ।